जन्म दिवसका लागि प्रेरणादायी सन्देश -::DainikPatra
जन्म दिवसका लागि प्रेरणादायी सन्देश
मिडिया क्षेत्रमा चहकिलो नाम हो – बालकृष्ण चापागाईं । मिडिया क्षेत्रमा उनको योगदान निकै महत्वपूर्ण छ । उनको जीवनरेखा लामो समय देखि मिडिया क्षेत्रमै अनवरत रूपमा बगिरहेको छ । वि.स.०३८ साल देखि भैरहवाबाट प्रकाशित दैनिक निर्णयबाट पत्रकारिता यात्रा सुरु गरेका उनी नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका संस्थापक अध्यक्ष, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) अध्यक्ष, प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष भइसकेका छन् । व्यक्तिगत रूपमा पनि उनले नेपाली विषयमा एम. ए.,पत्रकारितामा एम.ए., कानुनमा एलएलबी पास गरेका छन् । उनी अधिवक्ता पनि हुन् । त्यसरी नै उनले बौद्ध दर्शन र सञ्चारमा पीएचडी पूरा गर्दैछन् । उनको जीवन निकै प्रवाहमय र हराभरा छ । उनी सधै गतिशील र सक्रिय छन् । उनी कहिल्यै थाकेका छैनन् ।
यस वर्ष उनले आफ्नो ५६ औं जन्म दिवसका अवसरमा बोधिवंश– वृक्ष (पिपलको विरुवा) रोपण, गुरुभेटी र सम्मान कार्यक्रम राखेका रहेछन् । नयाँ संस्कृति निर्माणमा उनको यो योजना महत्वपूर्ण छ । त्यसैले आज मैले उनको जन्म दिवसमा पुगेर आफू सम्मानित भएको र नयाँ संस्कृतिमा उनले दिन थालेको योगदानलाई धन्य भन्न चाहन्छु । समाजले उनबाट सिक्न धेरै छ । उनी नेपाल आमाका सुयोग्य पुत्र हुन् ।
वरिष्ठ सम्पादक बालकृष्ण चापागाईले ०७५ मंसिर ८ गते दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिकमा आफ्नो ५६ औं जन्मदिवसको अवसर पारेर सानो भोटघाट कार्यक्रम राखेका थिए । सोही भेटघाट कार्यक्रमका प्रसङ्गमा बोल्दा उनले आफूले डाकेको यो कार्यक्रममा कुनै बडप्पन देखाउन नभई एउटा नयाँ परम्पराको थालनी गर्ने उद्देश्य भएको बताएका थिए । हरेक व्यक्तिले आआफ्नो जन्म दिवसको अवसर पारेर कमसेकम प्रत्येक वर्ष एक—एक रूख रोप्दै जाने हो भने पर्यावरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताएका थिए । यही सम्झेर उनले आफ्नो जन्म दिवसको अवसर पारेर आफ्नै बस्ती बुटवल–४, लक्ष्मीनगरस्थित शान्ति उद्यान परिसरमा एउटा बोधी वंश वृक्ष पिपलको विरुवा रोपेका छन् । उनले आफू उदाहरण बनेर अन्यत्रतिर पनि यस्तै सन्देश जाओस् भन्ने उद्देश्य राखेको बताएका छन् । उनले समाजलाई बदल्न पहिला आफू बदलिनु पर्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेका छन् । उनले गरेको यो कार्यलाई प्रशंसनीय कार्य मान्न सकिन्छ । यस्तै किसिमको सोंचाई र मनोवृत्तिले सकारात्मक प्रभाव पारिदिने हो भने हाम्रो वसुन्धरासस्य श्यामला धरा बन्ने थियो । पर्यावरणीय समस्याबाट प्रताडित हुनुपर्ने थिएन । यो सबैका लागि सुखद सन्देश हो ।
दोस्रो पक्ष आफ्नो जन्म दिनकै अवसर पारेर स्वर्गीय भाइ भागिरथ चापागाईंको सम्झनामा नहरपुर मावि बुटवलमा एक अक्षयकोष स्थापना गरेका छन् । उनले मर्यादापुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रको आदर्शलाई अनुपालन गरेका छन्  । भाइ–भाइ बीच चलेको कटुतालाई कम गरी आपसमा मिल्न र दाजुभाइलाई महत्वका साथ सम्मान दिन सक्नुपर्छ भन्दै विचार प्रस्तुत गरेका थिए । उनको यो आदर्शले भातृत्वलाई मलजल गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यो प्रगाढ किसिमको भातृत्वभाव समाजको लागि आदर्श बन्न सक्छ । यो हामी सबैको लागि पे्ररक प्रसङ्ग हो ।
आज हाम्रो समाजमा नैतिक, चारित्रिक र वैचारिक दृष्टिले इमान्दार व्यक्तिको खाँचो छ । समाजमा बालकृष्ण जस्ता मान्छेहरू बत्ती बालेर खोज्नु पर्ने भएको छ । अधिकांश व्यक्तिहरू ‘मै खाउँ मैलाउँ’ भन्ने भावनाले ग्रसित छन् । राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक पक्ष विकृत संस्कारले गाजेको छ । यसको कारण अनैतिक व्यक्तिहरूको हातमा राजनैतिक बागडोर हुनुले हो । दुश्चरित्र भएका मान्छेहरूले पार्टी नेतृत्व कब्जा गरेर चुनावमा टिकट हातमा पारी साम, दाम, दण्ड, भेदका आधारमा चुनाव जितेर सत्तामा पुग्छन् । निर्वाचित भई सकेपछि उनीहरूको पहिलो उद्देश्य निर्वाचनमा लागेको खर्च उठाउनु र ऋण तिर्नुहुन्छ । अर्को एजेन्डा आ–आफ्ना आसेपासेहरूलाई कसरी र कुन तरिकाबाट पोस्न सकिन्छ भन्नेमा रहन्छ । अरू कुरासित उनीहरूको कुनै साइनो रहँदैन । यसरी पद र सुविधासहितको लालच पद र सुविधाको दुरूपयोग नै उनीहरूको मुख्य ध्येय हुन्छ । यस्तो चरित्रका व्यक्तिहरूले चलाउने प्रशासन कहाँ शुद्ध बनोस् ? यस्तो चरित्र भएको नेतृत्वको बोक्ने संस्कार र संस्कृति कसरी परिस्कृत बनोस् ? नयाँ पुस्ताले के सिकोस् ? नयाँ राजनैतिक पुस्ताले के प्रेरणा पाओस् ?
सेवा भावनालाई मूर्त रूप दिने हरेक कार्यहरूको विशेष महत्व छ । बालकृष्ण चापागाईसँगै पत्रकारिता लागेर आफ्नो बल र बुताले माथि पुगेकाहरूले पनि उनबाट सिक्न धेरै जरुरी छ । राजनैतिक जीवनका व्यक्तिहरूबाट लिन सकिने प्रेरणाको सम्भावना कमै रहेका आजको अवस्थामा असल विचार भएका सामाजिक जीवनका अन्य पक्षहरूले देखाउने रुचि र सामाजिक नैतिक स्तरबृद्धिमा उनीहरूबाट भए गरिएका प्रयाशहरूलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । कुनै पनि कार्यक्रममा खर्च गर्ने धनराशिको संख्या यति ठूलो यति सानो भन्ने हुँदैन । यस्ता सामाजिक कार्यहरूप्रति दाताले देखाएको सद्भाव र सद्व्यवहार नै ठूलो हो । यस्तै अभिरुचिको शृङ्खला बढ्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा हाम्रो समाजले आजको जस्तो नैतिकता र जिम्मेवारीबोध एवं कर्तव्य चेतनाको खडेरी परेको स्थिति ब्यहोर्नु नपर्ला ।
समाजका अग्रजहरूले राम्रा–राम्रा कार्यहरू गरेर अनुजहरूलाई सही दिशा निर्देश गरिदिने हो भने आफ्ना अनुगामीहरूको दिशाहीनताको स्थिति ब्यहोर्नु पर्दैन । देशलाई उभो लाने भनेको यस्तै सकारात्मक मनस्थितिको सिर्जनाले हो । आज देशलाई उँधो धकेल्न खोज्नेहरू धेरै छन् । देशलाई माथि उठाउन प्रयाश गर्नेका खुट्टा तान्नेहरू प्रशस्तै छन् । तर देशलाई अघि लैजान सक्नुपर्छ भनी मन वचन र कर्मले लागि पर्नेहरू कता छन् भनेर खोज्नुपर्छ । किनभने खुट्टा तान्नेहरूले उनीहरूलाई अगाडि बढ्नै दिदैनन् । अहिले हामी कहाँ यो क्रम अटुट रूपमा चलेको छ । यसलाई भङ्ग गर्ने मानसिकता हामीमा जागृत हुनुपर्छ । जुन कुरा असल संस्कारको निर्माणबाट सम्भव छ । यो संस्कार अझै फल्ने, फुल्ने र झाङ्गिने अवसर पाओस् ।
अन्त्यमा बालकृृष्ण चापागाईको ५६ आंै जन्मदिवसको अवसरमा हार्दिक बधाई एवं मङ्गलमय शुभकामना । त्यसरी उनकी मित्रवत पत्नी पम्फा चापागार्इंमा अटल सौभाग्यको कामना । वरिष्ठ साहित्यकार रामचन्द्र भट्टराई, विदुषी मैया भट्टराई र मलाई सम्मान गर्ने दैनिक पत्र दैनिकका कार्यकारी प्रमुख तथा प्रधान सम्पादक बालकृष्ण चापागाईं तथा मिडिया परिवारप्रति हार्दिक शुभकामना ।